Japon - Madagasikara : Rivo-baovao eo amin’ny firenena roa tonta -
AccueilRaharaham-pirenenaJapon – Madagasikara : Rivo-baovao eo amin’ny firenena roa tonta
09/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fifanarahana vaovao no vokatry ny dian’ny Filoham-pirenena tatsy Japon. Tahaka ny firenena rehetra dia anisan’ny nanakatom-baravarana ny firenena japoney nandritra ny krizy, izay nisy teto amin’ny firenena ny taona 2009, hatramin’ ny taona 2014. Niverina ary nisy vokany kosa anefa izay fiaraha-miasa izay vokatry ny fitsidihana natao, dia ny fifanaovan-tsonia mikasika ny fanitarana sy ny fanavaozana ny seranan-tsambon’i Toamasina izay notanterahin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny Malagasy Henry Rabary-njaka, ary tsy hohadinoina ny fanohanana izay ataon’ity firenena ity amin’ny alalan’ ny JICA, izay mitondra ny tantsoroka eo amin’ ny sehatry ny fampandrosoana ara-pambolena sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ary ny lafin’ny ara-pahasalamana. “ Mbola maro ireo asa miandry sy ny fifanampiana eo amin’ ny sehatra hafa , izay hotohanan’ ny firenena japoney ……Madagasikara rahateo dia manolotra tontolo malalaka eo amin’ny fampiasa ara-bola sy ny lafiny ara-ekonomika, anatin’ny filaminana izay mandroso hatrany” io no nambaran’ny filohan’ny delegasionina Hery Rajaonarimampianina manoloana ireo mpampiasa vola japoney maro nanoloana azy.
Mitana ny laharana fahatelo rahateo i Japon eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ ny famatsiana an’i Madagasikara. Tsara ihany koa ny vokatry ny fifanakalozana teo amin’ ny firenena roa tonta nandritra ny taona 2013(jolay), noho ny fanondranana ny Nickel sy ny kobalta any amin’ ny firenena Japoney. Nanararaotra ihany koa ny filoha Malagasy nandritra ny fihaonany tamin’ ireo mpampiasa vola nandritra ny ( japonais Madagascar business forum) tamin’ ny fampahafantarana azy ireo tamin’ny fametrahana ny lalàna amin’ny fisintonana azy ireo hampiasa ny volany aty Madagascar . Izany dia noho ilay lalàna 3p izay manome tosika sy miaro ireo mpandraharaha vahiny izay mampiasa ny volany eto Madagasikara eo amin’ny lafin’ny teknoljia vaovao , fanjonoana sy ny harena an-kibon’ny tany, ny fisian’ny fifanakalozana ara-barotra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, rezionaly sy nasionaly . Ny japoney moa no laharana faha-5 eo amin’ny tsena izay hanondranan’ny japoney.